Plates Unxibelelwano Olubonakalayo - Imagazini yoyilo
Unxibelelwano Olubonakalayo Ukubonisa amasebe ahlukeneyo kwivenkile yempahla ye-didyk Imifanekiso yeza nombono wokuyivelisa njengeplates ezininzi ezinezinto ezahlukeneyo zeekhompyuter ngaphezulu kwazo, zikhonzwa ngendlela yerestyu. Imvelaphi emhlophe kunye nezitya ezimhlophe zinceda ukukhulisa izinto ezinikezelwayo kwaye zenze kube lula ukuba abatyeleli bafumane isebe elithile. Le mifanekiso yayisetyenziswa kwiibhodi zeemitha ezingama-6x3 kunye neeposta kwizithuthi zikawonke-wonke e-Estonia. Imvelaphi emhlophe kunye nokwenziwa okulula kuvumela ukuba lo myalezo wentengiso ubonwe ngumntu odlula ngemoto.
Igama leprojekthi : Plates, Igama labayili : Sergei Didyk, Igama lomthengi : Didyk Pictures.
Ukufota kunye nokuyilwa kweefoto
Unxibelelwano Olubonakalayo Sergei Didyk Plates